Ukusetha uhlelo oluxubekile lwe-Debian | Kusuka kuLinux
Ukusetha uhlelo oluxubekile lwe-Debian
Njengoba iningi lakwaDebian selivele lazi, linamagatsha amaningi:
Kepha kukhona nethuba lokwenza uhlelo oluxubekile ngokwenza izingxube ezinjenge:
okungazinzile + kokuhlola
+ ukuhlolwa okuzinzile
esitebeleni + esingazinzile
+ ukuhlolwa okuzinzile + okungazinzile
Ake sibone ukuthi sikwenze kanjani
Okokuqala, ukuze siphephe kumele senze ikhophi yemithombo yethu yohlu, ngalokhu sifaka ifayili:
Lapho sikwenzile lokhu sifaka amakhosombe egatsha noma amagatsha esiwafunayo kwimithombo yolwazi, ngokwesibonelo
deb http://ftp.br.debian.org/debian/testing main contrib non-free### I-Debian Esemthethweni - Ukuhlolwa Kwezokuphepha.
i-deb http://security.debian.org/testing / updates main contrib ### I-Debian Esemthethweni - Sid
i-deb http://ftp.br.debian.org/debian/okungazinzile okunikela okuyisisekelo okungamahhala ### I-Debian Esemthethweni - Yokuhlola
i-deb http://ftp.de.debian.org/debian/esivivinyweni main esivivinyayo ### soxhumanoningi - Audio - Rarewares
i-deb http://www.rarewares.org/debian/packages/unstable./### Multimedia -- Video -- Marillat
manje sigcina ifayili bese sisebenzisa:
Manje sizolungisa amafayela amabili: okuncamelayo ne-apt.conf
Kuleli fayela sengeza okulandelayo:
Pin-Priority: 950Iphakheji: *
Iphini: khulula o = xmixahlx
Okuphambili Kokubaluleka: 900Iphakheji: *
Iphini: khipha i- = testing
Okuphambili Kokubaluleka: 850Iphakheji: *
Iphini: khipha a = unstable
Okuphambili Kokubalulekile: 800Package: *
QAPHELA: Lesi yisibonelo, konke kuzoncika kumakhosombe esifuna ukuwabeka
Futhi manje sinezinketho ezimbili zokufaka amaphakheji:
Le ndlela yokufaka izofaka iphakheji oyifunayo yenguqulo ebekiwe, ixazulula ukuncika ngokuzenzakalela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukusetha uhlelo oluxubekile lwe-Debian
Lungisa lokho Cuorage.
Lungisa leyo carcamal
hahahahahahaha ungayithathi ngendlela engafanele ...
Hhayi uma ngingayithathi ngendlela engafanele, ngukuthi ngokugxekwa wenze iphutha hahaha
Ngizijwayeze ukuba nohlelo oluxubekile esikhathini esedlule; Angizange ngithande. Kepha kusebenza impela.
Ngiyazi, ngizamile izinhlelo ezixubekile futhi angizange ngikuthande ngoba ukuncika kuphukile, futhi nezimagqabhagqabha azixubeki, ngasinye sisegatsheni laso. KwabakwaDebianites abafuna lokhu okuhamba phambili, okungcono kakhulu yigatsha lokuhlola, noma linda iphrojekthi enqunyiwe ukuze ithole ukuhlolwa "okuzinzile" kwe-debian, hehe.
linda iphrojekthi ye-debian-cut ukufeza ukuhlolwa "okuzinzile" kwe-debian
Yilokho okungcono kakhulu
Uxolo bobabili kepha ukuhlolwa kwe-Debian akukwazi ukuzinza kakhudlwana. Kakade ngalolu hlobo lwento exubile, ebizwa empeleni i-APT-Pinning, Ngikhulumile kwesinye isihloko.
Ngeke ngiphawule ngoba angikazami kepha akukhona ukugoqa okumsulwa njengoDebian CUT
Sawubona, ukucaciswa okuncane. "Okokuhlola" akulona igatsha le-Debian, i-repo nje. Amagatsha angama-3 okuqala ashiwo kokuthunyelwe.
Uma ngisebenzisa i-Debian Testing futhi nginezindawo zokugcina ezinesitebele ezinikwe amandla, kudingekile yini ukuchaza amafayela we-apt.conf nezintandokazi? Ingabe i-APT ayithathi ngokuzenzakalela amaphakheji kusuka ku-Testing futhi kuphela uma ingawatholi iwathatha ku-Stable?
Faka i-KahelOS kusuka ku-USB
Okufundwa Kakhulu ku-Masisebenzise I-Linux: Januwari 2012